युगसम्बाद साप्ताहिक - शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप...
Wednesday, 10.16.2019, 03:02pm (GMT+5.5) Home Contact
शिलान्यास गर्ने त्यसपछि चुपचाप...
Wednesday, 01.18.2017, 12:56pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । अहिले नेपाल र नेपाली जनताको प्रमुख समस्या भनेको भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाको पुनःनिर्माण हो । जनताको घरदेखि सरकारी भवन तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको काम निकै सुस्त छ । पुनःनिर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण राजनीतिकरणको शिकार भएको छ भने विदेशीले दिने घोषणा गरेका सहयोग राशि उपयोगको योजना छैन ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अनुमान रहेको छ र विदेशी मित्रराष्ट्र तथा दाताहरूले करीब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म करिब ७ लाख परिवारमध्ये ६ लाख जतिले घर बनाउने अनुदानको पहिलो किस्ताको सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जनाए पनि यसको सत्यतामा आशंका गर्ने ठाउँ थुप्रै छ ।
अर्कोतिर पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणमा पनि सरकारको गति शून्य छ । केवल शिलान्यास र उद्घाटन गने बाहेक केही काम भएको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७२ माघ २ गते शिलान्यास गरिएका दुई पुरातात्विक सम्पदा बनेको छ । गत वर्ष १८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन सुरु गरिएको दुई सम्पदाको पुनःनिर्माण भने अलपत्र छ ।
विसं १९९० माघ २ गते भूकम्प गएको सम्झनामा सरकारले २०५६ सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालेको छ र ‘भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार, भैँचालो थेग्ने घर र भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ आज १९औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस माघ २ गते मनाइयो ।
यसको पुनःनिर्माणका लागि गत वर्ष यही दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरबाट शुभारम्भ गर्नुभयो । पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिइएको थियो । महानगरपालिकाले पुरातात्विक संरचनामा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि एक वर्ष पुग्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले पानी सुकाइएको रानीपोखरीमा झार उम्रिएको दृश्य देख्न सकिन्छ ।
पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर विभागले नै रानीपोखरी पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको बताउनुहुन्छ । सुरु हुने समय भने अझै निश्चित गरिएको छैन । गत वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवसकै अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ ललितपुरको बुङ्मतीमा रातो मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर पुनःनिर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो । यो काम पनि अहिले सुस्त गतिमा छ ।
श्रीलङ्का सरकारको सहयोगमा तीन वर्षमा रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनःनिर्माण गरिसक्ने योजना शिलान्यासका बेला सार्वजनिक गरिएको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अलपत्र बनेका यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् ।
सरकारले निर्माण गर्न लागेका सम्पदाको त यो हालत छ भने आठ लाखभन्दा बढी निजी घर पुनःनिर्माण कसरी सहज होला ? अहिले यो प्रश्न भूकम्प प्रभावित जिल्लावासीमा छ । पुनःनिर्माणको काम गर्न गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको भनी केही दिन अघिमात्र नेतृत्व परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ नेतृत्वले समयमै पुनःनिर्माण गर्न सक्ला ? अहिले यो आममानिसको जिज्ञासा बनेको छ ।
अर्कोतिर भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि दक्ष कामदारको अभाव छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने कामदार नपाइएकै कारण काम अघि बढाउन नसकिएको काभ्रेपलाञ्चोकका पीडित काल्साङ तामाङले गुनासो गर्नुभयो ।
दक्ष कामदार बढाउन विशेष कार्ययोजना राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पेश गरिएको एकाइले जनाएको छ । पुनःनिर्माणमा आवश्यक निर्माणकर्मीको आवश्यकता पूर्ति गर्न मन्त्रालयले तालिममा एकरूपता ल्याउने गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ स्वीकृत गरेको छ ।